अनलाइन पैसा कमाउनको लागि उत्तम सर्वेक्षण साइटहरू Ebuno
Ebuno मा शामिल हुनुहोस् र संगै पैसा कमाउन शुरू गर्नुहोस् सशुल्क सर्वेक्षण!
उत्तम सर्वेक्षण साइटहरू 2021 अनलाइन पैसा कमाउन
आज त्यहाँ बिभिन्न सर्वेक्षण वेबसाइटहरू छन् जुन तपाईंलाई प्रत्येक पूरा हुनेमा थोरै भुक्तानीको लागि सट्टा सर्वेक्षण लिन प्रस्ताव गर्दछ। त्यसोभए यी मध्ये कुन वेबसाइट साईन अप गर्न योग्य हुन सक्छ र वास्तवमा केही समय खर्च गर्न सक्छ? यस लेखमा, हामी हाम्रो रायमा सबै भन्दा राम्रो सर्वेक्षण वेबसाइटहरूको बारेमा केही उपयोगी जानकारी प्रदान गर्न हाम्रो सक्दो प्रयास गर्ने छौं।
त्यसोभए तपाईं कसरी सर्वेक्षण साइटहरूमार्फत अनलाइन पैसा कमाउने गर्नुहुन्छ?
इन्टरनेटमा भुक्तान गरिएको सर्वेक्षण गर्नु केही पैसा कमाउने सजिलो तरीका हो। तिनीहरूले धेरै तिर्न सक्दैनन तर प्राय साइटहरूले उपहार कार्डहरू, वास्तविक नगद र अन्य सुविधाहरू प्रदान गर्दछन् जसले कम्पनीहरूलाई बजार अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्छन्। तपाईले सर्वेक्षणमा उपलब्ध गराउनुभएको रायले ब्रान्ड र कम्पनीहरूलाई नयाँ र उत्तम उत्पादनहरू वा सेवाहरू बनाउन मद्दत गर्दछ। जे होस्, त्यहाँ नक्कली साइटहरू पनि छन् जुन तपाईको व्यक्तिगत जानकारी पछि मात्र हुन् र ती मध्ये केहि सहभागीले भुक्तान गर्दैनन्। यसमा सतर्कताको लागि कल हुन्छ जब तपाईंको पैसा पैसा गुमाउन वा समय खेर फाल्नबाट रोक्नको लागि तपाईंको लगानी गर्न साइटहरू छनौट गर्दछ।
उत्तम सर्वेक्षण साइटहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको इनाम नगदिने विभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ। यी भुक्तानी विकल्पहरू हुन् PayPal, एक प्रीपेड visa क्रेडिट कार्ड, Starbucks, Walmart, Amazon, Google Play, मेल गरीएको चेक, अनलाइन खेल कोड, भौतिक उत्पादनहरू, परोपकारी दानहरू वा नि: शुल्क उपहार कार्डहरू। त्यहाँ वैध सर्वेक्षण साइटहरू मध्ये केही समावेश छन् Ebuno, CashKarma, Valued Opinions, Opinion Outpost, Inbox Dollars, LifePoints, MyPoints, Survey Junkie, Swagbucks, Toluna, Vindale Research, PrizesRebel, Pinecone Research र Branded Research अरु मध्ये।
यस लेखमा समेटिएका वेबसाइटहरूमा अवलोकन:
Ebuno एक सर्वेक्षण वेबसाइटहरू जुन एक आधुनिक र प्रयोग गर्न सजिलो प्लेटफर्म हो जुन प्राय: आरामदायक हुन्छ विशेष गरी जब तपाईं नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। हामी यहाँ छौं Ebuno तपाईंको राजस्व अधिकतम बनाउन र सकेसम्म धेरै समय बचत गर्नका लागि उत्तम सम्भावित सर्वेक्षणहरू प्रदान गर्न सक्षम हुन धेरै ध्यान दिनुहोस्।
त्यसोभए राम्रो सामानमा जाऔं। तपाई कति कमाउन सक्नुहुन्छ? विशिष्ट सर्वेक्षणहरू कति लामो हुन्छन्? तपाइँ कत्तिको पटक जाँच हुन्छ? कमाउने क्षमता कत्तिको हो? कसरी रेफरल कार्यक्रम काम गर्दछ? के तपाई कुनै बोनस पाउन सक्नुहुन्छ?
तपाईं कति कमाउन सक्नुहुन्छ? Ebuno?
यो जवाफ दिन सधैं गाह्रो प्रश्न हो र हामी पनि सटिक उत्तर दिन सक्दैनौं। यो सबै तल तपाईंको डेमोग्राफिक्स र स्थानमा आउँदछ। केही देशहरूले प्रत्येक पूर्णको लागि धेरै उच्च औसत भुक्तान हुन्छन् किनकि कम्पनीहरूले त्यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई लक्षित गर्छन् र उनीहरूको रायका लागि अधिक तिर्न इच्छुक छन्। सब भन्दा बढी तिर्ने देशहरू प्राय: फिनल्यान्ड, स्विडेन, नर्वे, स्विजरल्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबिया हुन्।
चाहे माथि उल्लेखित देशहरु मा सर्वेक्षण अनुसार अत्यधिक राजस्व छ यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ भुक्तान गरिएको सर्वेक्षण साइटहरुमा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। जापान, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, रसिया र ब्राजिल जस्ता देशहरुमा सर्वेक्षण कम्पनीहरुका लागि अनमेन्ट मागको एक उच्च मात्रा छ जसको मतलब यी प्रयोगकर्ताहरूको लागि सर्वेक्षणहरू उपलब्ध छन्।
त्यसोभए तपाईले कति कमाउन सक्नुहुन्छ? ठिकै प्रति सर्वेक्षण औसत भुक्तानी प्रति $ ०. USD अमेरिकी डलर पूरा हुन्छ र यी सर्वेक्षणको लागि औसत समय सामान्यतया --0.5 मिनेट जति हुन्छ। कृपया दिमागमा राख्नुहोस् कि यी मानहरू धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ।
स्क्रिनिंग प्रक्रियाले कसरी काम गर्दछ?
यदि तपाईंले वेबसाईटहरूमा सर्वेक्षण गर्नु भएको छैन भने Ebuno पहिले, तपाईं अपरिचित हुन सक्नुहुनेछ स्क्रिन आउटमा के हुन्छ भनेर। एक स्क्रीन बाहिर जब एक प्रयोगकर्ता प्रविष्ट विशेष सर्वेक्षण को लागी आवश्यकताहरु पूरा गर्दैन। तपाइँले एक सर्वेक्षण जति सक्दो राम्रो प्रविष्ट गर्नु अघि हामी तपाइँसँग मेल खाने कोशिस गर्छौं तर दुर्भाग्यवस, हामी सर्वेक्षणको लागि सही आवश्यकताहरू प्राप्त गर्दैनौं त्यसैले १००% मिलान दर असम्भव छ। खुल्ला Ebuno, तपाईं सर्वेक्षणको साथ करीव rate०% सफलता दर पाउनुहुनेछ जुन उद्योग मानक भन्दा धेरै राम्रो बिट हो।
सन्दर्भ र बोनस
Ebuno एक रेफरल प्रणाली प्रदान गर्दछ जसले तपाईंलाई तपाईंको रेफरलले सर्वेक्षणहरूमा के गर्छ भनेर १०% दिन्छ। त्यसोभए यदि तपाइँले तपाइँको व्यक्तिगत यूआरएल प्रयोग गरी १०० जनालाई सन्दर्भित गर्नुहुन्छ भने, र प्रत्येक व्यक्तिले surve ०.० को औसतको साथ २० सर्वेक्षण पूरा गर्छ भने तपाइँले १०० डलर कमाउनुहुनेछ! तपाईले आफ्नो आय पनि बिभिन्न कार्यहरूको साथ बढाउन सक्नुहुन्छ जुन हरेक सर्वेक्षणले कति तिर्ने भन्नेमा अस्थायी वृद्धिलाई सक्रिय गर्दछ। तल Ebuno द्वारा प्रस्ताव गरिएको विभिन्न कार्यहरूको छवि छ।
यदि तपाई सामिल हुन चाहानुहुन्छ भने Ebuno, गृहपृष्ठ मा जानुहोस्
Ebuno सशुल्क सर्वेक्षणमा साइन अप
भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणहरू पूरा गर्नुका साथै, तपाईं उनीहरूको स्वीकृत खोज इञ्जिनमा ईन्टरनेट ब्राउज गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, तिनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गरेर वा भिडियोहरू हेरेर। तपाईले बोनस कमाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाई साईन अप गर्नुहुन्छ र त्यसपछि पोइन्ट प्राप्त गर्नुहोस् जब तपाई यी बिभिन्न गतिविधिहरू गर्नुहुन्छ। तपाईं बिन्दुहरू विभिन्न फुटकर बिक्री वा क्यासब्याकको साथ क्यास आउट गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। औसत भुक्तान ०..0.4 र $ २ बीच छ।
प्रतिबन्धहरू Swagbucks सर्वेक्षण प्यानल
तपाई १ 13 बर्ष भन्दा माथिको हुनु पर्छ र अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत र अमेरिका वा अन्य कुनै अनुमोदित देशको नागरिक।
मा साइन अप गर्नुहोस् Swagbucks
तपाईं एक प्रोफाइल सिर्जना गरेर यो साइट प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस् ताकि प्रणालीले तपाईंलाई सर्वेक्षणहरू सँग मेल खान सक्छ जुन तपाईंको उपभोक्ता प्राथमिकताहरूसँग सम्बन्धित छ। पछि, तपाइँ तपाइँको मोबाइल उपकरण वा कम्प्युटरमा सर्वेक्षण भर्न र प्रत्येक सर्वेक्षणको लागि अंक कमाउन सक्नुहुन्छ। पछि, तपाईं ई-गिफ्ट कार्ड वा पेपैलको लागि पोइन्ट्स रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रतिबन्धहरू Survey Junkie सर्वेक्षण प्यानल
तपाई १ 16 बर्षको हुनु पर्छ।
मा साइन अप गर्नुहोस् Survey Junkie
यो साइटले तपाईंलाई अनलाइन सर्वेक्षणहरू पूरा गर्न, किनमेल गर्न, कुपनहरू भुक्तान गर्न, खेलहरू खेल्न र टिभी र भिडियोहरू हेर्नका लागि पैसा कमाउन अनुमति दिन्छ। साइटले तपाईंलाई साइन अपका लागि $ of को बोनस दिनेछ र यसले भुक्तान विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। औसत भुक्तान $ ०.०१ र $ ००२5 बीच छ।
प्रतिबन्धहरू InboxDollars सर्वेक्षण प्यानल
तपाईंको उमेर १ and बर्ष र माथिको हुनुपर्छ।
मा साइन अप गर्नुहोस् InboxDollars
Birger Jarlsgatan 8, स्टॉकहोम
Ebuno स्टॉकहोम स्वीडेन बाट एक वैध कम्पनी हो
सेवा सर्तहरू र गोपनीयता नीति
संग बनाइयो स्टॉकहोम © २०२० Ebuno AB मा